Maraoka: Kolikoly, Politika, Sy Ny Vokatry Ny Daroka Baomba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2017 3:27 GMT
Taorian'ny namoahan'ny Los Angeles Times lahatsoratra momba ny fandaniana tamin'ny sarimihetsika Sahara 2003, izay nanasongadina ny habetsaky ny vola naloa tamin'ny kolikoly teo an-toerana (“vola aloa noho ny fanajana, ‘hafaliam-po’ sy ny ‘kolikoly ao an-toerana’ mitentina 237.386 dolara no navoaka tany Maraoka mba hanafainganana ny sarimihetsika “), nanome ny heviny ny bilaogera Maraokana.
Nalahelo noho ny fandaniana i Laila Lalami: “Am-pahatsorana, nanomboka nihomehy tamin'izany rehetra izany aho, mandra-pahafantatro fa nesorina ny ampahan'ny tetikasa hazo voanio ary natsahatra ny tetikasa fanatsarana renirano ho amin'ny tombontsoan'ny Maraokana mba hikarakarana fandraisana sarimihetsika, ary avy eo aho te hitomany. “
Liosliath indray nandefa lahatsoratra misongadina tao amin'ny bilaoginy, izay manasongadina ny “ampahany mampalahelo indrindra” toy izao: “Ny ‘mpikarama’ ao Sahara, ohatra, nandray karama kely 233 dolara isan-kerinandro, mitovy amin'ny karama iray andro ho an'ny Amerikana mpikarama.”
Tao an-tsain'ireo bilaogera ihany koa ny fiantraikan'ny daroka baomba vao haingana tao Casablanca sy ny fiarovana ao Maraoka. Bilaogera Taamarbuuta nilaza tao amin'ny voam-pasika, “Jereo, ny azo lazaina dia tsy manohitra an'i Amerika ny Maraokana. Fa angamba ny governemantany kosa (saingy etsy andaniny, afa-manisa amin'ny rantsan-tanana ila ny namako Amerikana izay tsy manohitra ny governemanta aho!), eny, saingy i Amerika sa ny Amerikana?”
Somary mamazivazy kosa ny fijerin'ny Cat in Rabat izany rehetra izany – manamarika fa tonga tao an-drenivohitra ny fitaovana mpamantatra vy. “Nametraka ny lakolosy & kiriokan'ireo skaneram-piarovana marobe an'i Rabat aho ary tsy mbola nisy olona nangataka ahy mba hiala sy hisava ahy. Ka raha misy mpiambina ankehitriny ao amin'ny Pizza Hut, tsy nisy olona nahita azy mampiasa ny fitaovana famantarana metaly”, hoy izy nanamarika.
Everything Morocco indray namaly ireo nanontany hoe “tsara aro ve i Maraoka?” amin'ny filazana hoe “Sarotra ny mamaly izany raha tsy misy baolina kristaly sy tsy misy fanazavana tena lava sy manintona…Sarotra kokoa noho ny miteny hoe fampihorohoroana; fivavahana na anti-Amerikana na karazany hafa.”